Akụkọ - Identchọpụta na Ijikọ na Mkpụrụ njem
Identchọpụta na Ijikọ na moto njem
Ntụziaka Njikọ Ọdụ gbọ Mmiri Mmanụ maka Motor Motor
Ugboro abụọ njem njem na-enwekarị ọdụ ụgbọ mmiri anọ ga-ejikọ na akụrụngwa gị. Na otu ọsọ Travel Motor naanị nwere ọdụ ụgbọ mmiri atọ dị mkpa. Biko chọta ọdụ ụgbọ mmiri ziri ezi ma jikọọ eriri eriri gị kwesịrị ekwesị na ọdụ ụgbọ mmiri n'ụzọ ziri ezi.
P1 & P2 n'ọdụ ụgbọ mmiri: ọdụ ụgbọ mmiri maka mmanụ mgbali na ntinye.
E nwere nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri abụọ dị n'etiti ọtụtụ. Ha na-abụkarị ọdụ ụgbọ mmiri abụọ kachasị ukwuu na Travel Motor. Họrọ ma otu dị ka ọdụ ụgbọ mmiri na onye ọzọ ga-abụ ọdụ ụgbọ mmiri. Otu n'ime ha jikọtara ya na eriri nrụgide mmanụ na nke ọzọ ga-ejikọta ya na sooks na-alọghachite mmanụ.
T n'ọdụ ụgbọ mmiri: Oil igbapu n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọtụtụ mgbe, enwere ọdụ ụgbọ mmiri abụọ dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri P1 & P2. Otu n'ime ha dị irè maka ijikọ ma nke ọzọ na-apụ apụ. Mgbe nzukọ, anyị na-atụ aro ka ị na-nti T n'ọdụ ụgbọ mmiri na elu ọnọdụ. Ọ dị ezigbo mkpa ijikọ ọdụ ụgbọ mmiri T a na aka nri nke eriri drain. Ejikọla eriri ọ bụla emetụtara na ọdụ ụgbọ mmiri T ma ọ nwere ike ibute nsogbu hydraulic na n'ibu igwe njem gị.
Port Port: Ugboro abụọ na-achịkwa ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọ na-abụkarị ọdụ ụgbọ mmiri abụọ na-agba obere ọdụ ụgbọ mmiri kacha nta na Travel Motor. Dabere na nrụpụta dị iche na ụdị dị iche iche, ịnwere ike ịchọta ọdụ ụgbọ elu abụọ na-eso ọnọdụ atọ nwere ike:
a. N'elu ọnọdụ elu nke P1 & P2 n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ihu n'ihu ọtụtụ mkpọchi.
b. Na akụkụ nke manifold na na 90 ogo na ntụziaka nke ihu ihu.
c. ihe Na azụ n'akụkụ nke manifold.
Ọdụ ụgbọ mmiri dị n'akụkụ ọnọdụ
Ps port n'azụ positon
Jikọọ n'ọdụ ụgbọ mmiri a na ọsọ ọsọ ịmafe sooks nke igwe gị usoro.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ọ bụla oru nkwado, biko kpọtụrụ anyị engineer.